Ndepụta Email na Metrọ I Kwesịrị Inyocha
Ka ị na-elele mkpọsa email gị, enwere ọnụọgụ metrik ị kwesịrị ilekwasị anya iji melite arụmọrụ ahịa email gị niile. Omume email na teknụzụ agbanweela karịa oge - yabụ kpachara anya imelite ụzọ ị si elele arụmọrụ email gị. N'oge gara aga, anyị ekerịtala ụfọdụ n'ime behindkpụrụ n'azụ usoro metrik email.
Ntinye igbe - iji zere SPAM folda na Junk nzacha ga-ekwu ma ọ bụrụ na inwee ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha (100k +). Onye zitere gị aha, verbiage eji na isiokwu gi na ozi ozi… ihe ndị a niile dị oke egwu metrik iji nyochaa nke ndị na - eweta email gị anaghị enyekarị. Email na-enye ọrụ nyochaa nnapụta, ọ bụghị ntinye igbe. Yabụ, gị email nwere ike nyefere… ma ozugbo na junk iyo. Need chọrọ ikpo okwu dị ka 250ok iji lelee igbe ntinye gị.
Ziri ezi - Yana igbe ntinye akwụkwọ bụ aha nke onye zitere gị. Ha dị na ndepụta oji ọ bụla? A na-ahazi ndekọ ha nke ọma maka ndị na-enye Ọrụ Internetntanetị (ISPs) iji kpọtụrụ ma nyochaa na ha nwere ikike izipu email gị? Ndị a bụ nsogbu ndị na-achọkarị a nnapụta onye ndụmọdụ iji nyere gị aka ịtọlite ​​ma jikwaa sava gị ma ọ bụ nyochaa ọrụ ndị ọzọ ị na-eziga. Ọ bụrụ na ị na-eji ndị ọzọ, ha nwere ike ịnwe nkwupụta jọgburu onwe ya nke na-enweta ozi ịntanetị gị na folda junk ma ọ bụ gbochie ya kpamkpam. Some people utilize SenderScore for this, but the ISPs not Monitor your SenderScore core onye ọ bụla ISP nwere ụzọ nke ha iji nyochaa aha gị.
Ndepụta njigide - a na-ekwu na ihe ruru 30% nke ndepụta nwere ike ịgbanwe adreesị email na otu afọ! Nke ahụ pụtara ka ndepụta gị wee na-eto eto, ị ga-echedo ma kwalite ndepụta gị yana idowe ndị ọzọ ndị debanyere aha gị ka ha nwee ahụ ike. Ego ole ka ndị debanyere aha ha na-efu kwa izu na ole ndị debanyere aha ọhụrụ ị na-enweta? Mgbe ibiaghachi udu kwa mgbasa ozi na-enyekarị, ọ na-eju m anya na njigide ndepụta niile abụghị isi elebara anya nke ndị na-enye ọrụ email! Ndepụta ndepụta bụ ihe dị mkpa iji mata ogo ọdịnaya ọdịnaya email ị na-ekesa.
Akụkọ Spam - Olee otú ọtụtụ ndị debanyere aha kọrọ gị email dị ka junk? Echere na ọ dịghị - ma ọ bụrụ na ịnwere karịa ole na ole ị ga-ezigara gị ịkwesịrị iche banyere ebe ị na-enweta ndị debanyere aha a na mkpa nke ọdịnaya ị na-ezigara ha. Ikekwe ị na-eziga ọtụtụ ozi ịntanetị, ha na-ere ahịa nke ukwuu, ma ọ bụ na ị na-azụta ndepụta… ihe ndị a niile nwere ike ibute mkpesa SPAM dị elu nke nwere ike mechie gị iziga kpamkpam.
Meghee ọnụego - Emeghere na-enyocha site na inwe pixel nsuso gụnyere na ozi email ọ bụla zitere. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ahịa email na-egbochi onyonyo, buru n'uche na ọnụego gị ga-adịkarị elu karịa ọnụego emeghe ị na-ahụ na email gị nchịkọta. Ọnọdụ imepe emepe dị mkpa iji lelee anya n'ihi na ha na-arụtụ aka etu esi ede ederede isiokwu yana etu uru ọdịnaya gị si baa uru.
Pịa Ọnụego - Gini ka ichoro ka mmadu mee site na email gi? Nleta nleta ịlaghachi na saịtị gị bụ (olile anya) usoro bụ isi nke mkpọsa ahịa email gị. Gbaa mbọ hụ na ị nwere ike ịme ihe na email gị ma ị na-akwalite njikọ ndị ahụ nke ọma kwesịrị itinye ya na atụmatụ na njikarịcha ọdịnaya.
Pịa imeghe ọnụego - (CTO ma ọ bụ CTOR) N'ime ndị mepere email gị, gịnị bụ ọnụego pịa-site? A na-agbakọ ya site na ịnara ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha pụrụ iche bụ ndị pịa mkpọsa ma kewaa ya site na ọnụ ọgụgụ pụrụ iche nke ndị debanyere aha ndị mepere email. Nke a bụ ụkpụrụ dị mkpa n'ihi na ọ na-atụle njikọ aka na mkpọsa ọ bụla.
Ọnụ ọgụgụ ntụgharị - Ya mere, ị mere ka ha pịa, ha agbanweela n’ezie? Ntughari mgbanwe bụ atụmatụ nke ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email anaghị ewe uru dị ka o kwesịrị. Ọ na-achọkarị snippet koodu na peeji nkwenye gị maka ndebanye aha, nbudata, ma ọ bụ ịzụta. Ntughari nsụgharị na-enyefe ozi ahụ na email gị nchịkọta na ị mechaala ịme oku na-arụ ọrụ nke kwalitere n'ime email ahụ.
Ekwentị Mepee Ekwentị - Nke a dị oke ugbua… na B2B imerime ozi ịntanetị gị mepere na ekwentị mkpanaaka. Nke a pụtara na ị ga-elebara anya n'ụzọ pụrụ iche etu gị A na-ewu ahịrị isiokwu ma hụ na ị na-eji emebe email aghụghọ a ga-elele ya nke ọma ma melite ọnụego mmeghe na pịa-site na ọnụego.
Nkezi Nkezi Uru - (AOV) N'ikpeazụ, ịdebanye adreesị ozi-e site na ndenye aha, site na nurturing, site na ntughari dị oke egwu ka ị na-atụle arụmọrụ nke mkpọsa email gị. Ọ bụ ezie na ọnụego ndị ntụgharị nwere ike ịdịgide na-agbanwe agbanwe, ọnụego ndị debanyere ego na-emefu n'ezie nwere ike ịdịgasị iche.
Tags: AOVnkezi iji urublacklistụba ọnụegopịa-na-emeghe ọnụegontụgharị ntụgharịctoihe ndozinnapụtaemail ojiiemail metrikaha emailigbe mbatandetu njigideemeghe ọnụegoziri ozispam mkpesaakụkọ spam
Anyị Kacha Mma Ime Email Nwepu-Na Strategy Mgbe